1 000 ireo mpizaika andrasana amin'ny lasy faha-15
Vanim-potoan'ny lasy izao. Mikarakara ny lasy faha-15 ny Kiadin'i Madagasikara izay hotontosaina manomboka ny 26 aogositra ho avy izao ary hifarana ny 3 septambra any Sahafitahana, kaominina Ambohibary, distrikan'i Moramanga. Hitaroka io lasy lehibe io ny Filoha nasionaly Bison Maharitra ary hanokatra amin'ny fomba ofisialy kosa ny minisitry ny fambolena Rakotovao Vyvato ny alatsinainy 29 aogositra.
1 000 any ho any ireo mpilasy andrasana izay mitsinjara avy amin'ny sampana mavo, sampana mattso ary sampana mena ahitana ireo ankizy sy tanora manomboka ny 7 ka hatramin'ny 17 taona manerana ny faritra 15 misy ny Kiady.
Marihina fa mitaiza sy manolokolo ny ankizy sy tanora ho lasa olom-banona mahay miatrika adidy sy hahaleo tena ny Kiadin'ny Madagasikara. Fahalalam-pomba, fahaiza-miaina, fitaizam-batana sy fanahy, samy omena ny mpikambana avokoa izany. Ny toby filasiana any Sahafitahana dia toerana iray hahazoan'ny skoto zazalahy sy zazavavy mianatra ireo rehetra ireo satria efa nomanina sy nokendrena hifanaraka tsara amin'ny fampianarana, fiofanana ary fanabezana rehetra ireo fotodrafitrasa najoro. Manana sivy andro be izao ireo skoton'ny Kiady hifohana rivotra madio, hifandray amin'ny hafa, hifanoro amin'ny tsara. Manamafy izany ny tarigetra hoe "Kiady vonona sy tia olona, mandray adidy koa, manao asa soa".